Waxa la sheegay in qaybo yidhi waxa aan idiin diyaarinayna fursad waxbarasho oo dibadaha ah in dad badan lagu dhacay - ዜና ከምንጩ
Waxa wargayska addis maleda uu waramay cabanayaal sheegay in ay jiraan xafiisyo aan shaci haysn oo yidhi waxa aan idiin diyaarinayna fursad waxbarsho oo dibadaha ah magalada addis ababa oo ay soo badanayaanna, dhalinyaradana ay siren oo lacago badan ka dhaceen oo ay xafiisyadaasina isku tilmaameen in ay wakaalado yihiin.
Waxa ay sheegeen dadkaasi cabanaya in xiligan xaadirka ah ay ku soo badanayaan magalada gaar ahaanna xafada boole wakaaladahan hawlahan sharci darada ah samaynaya ee wararka beenta ah ku khiyaameeya dadka in ay lacag badan kaga uruursadaan si sharci daro ah. Waxaana ay uu sheegaan dadka in fursad waxbarasho ah oo dibadaha ah ay uu abuurayaan oo ay ka qadaan lacag gaadhaysa ilaa sodon kun oo bir, marka ay lacagaha ka uruursadaan kadibna waxa ay badalaan cinwaanadii hore looga heli jiray.
Waxa kale oo ay sheegeen in ay jiraan wakaalado badan oo si sharci daro ah ku shaqaysta oo dadka ku yidhaahda waxa la idinka aqbalay machadyo waxbarasho oo dibadaha ka jira, sidaas darteedna waxa la idiinka baahanyahay in aad bixisaan lacag gaadhaysa ilaa boqol kun oo bir marka lacagaha ay ka qaataanna la waayo.
Waxa ay sida oo kale ay yidhaahdeen in ay soo badanayaan shakhsiyaad iyo wakaalado ayaga oo aan haysan aqoonsi oo aan sharciyaysnayn in ay hawlahan sameeyaan oo ay shacabka lacago ka uruursadaan hadii aan talaabo laga qaadinna in ay jiri doonaan qaar kale oo ku dhaqma ficiladan ay kuwaasi ku dhaqmeen oo ay abuuri doonto dhibaatooyin kala duwan.
Wakaaladaha sharciyaysan ee ka shaqeeya fursadaha bilaa lacagta ah ee waxbarashada dibadaha ah ee (scholarship) in ay muwaadininta raba in ay ka fa’aidaystaan fursadahaasi ay sida oo kale ku sameeyaan ficiladaasi sharci darada ah ayaa la sheegay.
Gabadh aan rabin in magaceeda la sheego oo ka shaqaysa wakalaadaha sharcyaysan mid ka mid ah oo wargayska addis maleda uu warantay ayaa tidhi waxa noo yimaada dhalinyaro badan oo wakalaaladaha aan sharcyaysnayn lagu khiyaameeyay oo laga qaatay lacago gaadhaya labaatan ilaa sodon kun oo bir, sidaasi darteed waxa dhacda in ay anagan kalsooni naga qabin waayaan oo waxaanu soo hor dhignaa sharcigayga aqoonsi. Waxa kale oo aan isku dayna in aanu la xidhiidhsiino shakhsiyaad ka tagay wakaladayada oo waxbarasho dibadaha ku jooga oo wax ka barta. Waxana aan sidaasi uu samayn madaama ay magalada ku soo badanayaan qaybo hawshan ku hawlan oo lacago badan dadka kaga uruursada si sharci daro ah.
Wargayska addis maleda oo arintan ka waraystay madaxa xafiiska ganacsiga ee magalada addis ababa mudane Dhaanel Milkeesa ayaa waxa uu yidhi in asaga laftigiisu uu arintan wax ka maqlay mooye aanu wax war hubaal ah ka haynin.
Balse buu yidhi cida hawsha noocani ah ku hawlani waa in marka hore machadka uu qaabilsan qaybtani ay ka helaan aqoonsi. Tusaale ahaan sida qaybaha ka shaqeeya caafimaadka in ay aqoonsi marka hore ka qaatan wasarada cafimaadka, kuwa doonaya in ay ka shaqaystaan qaybta waxbarashadana waa in sida oo kale marka hore ay aqoonsi ka helaan wasaarada waxbarashada ama xafiiska waxbarashada, kuwa wadada sharciyaysan soo marana waxa loo gudbiya qayb magaalooyinka oo waxa la siiya sharci ganacsi ama leesan.
Waxa kale oo uu yidhi waxa jiri kara xiligan xaadirka ah in ay jiraan magalada qaar ku hawlan hawsha fursada uu samaynaysa cidii doonaysa in ay dibadaha wax ka soo bartaan oo sharciyaysan iyo qaar aan shrciyaysnaynba, balse hadii nala soo ogaysiiyo in ay jiraan qaar aan sharci haysan oo dadka si sharci daro ah lacagaha uga uruursada inta aan dabagal ku samayno marka aan hubsano in aanay sharci haysan waxa aan ka xidhi doona meheradahooda talaabo sharcina waan ka qadi doonaa.
Wargayska addis maleda ayaa wax ka waydiiyay wasaarada waxbarashad arinta ah in ay jiraan dilaalin si sharci daro ah kaga shaqaysta qaybtan waxana ay wasaradu ugu jawaabtay in hawshani ay khusayso booliska oo aanay wasarada khusaynin.
Waxa xusid mudan in bulshadu marar badan ay ka waramaan in xiligan xaadirka ah dalka iyo magaladaba ay ka jirto shaqo li’i, oo ay arintanina abuuri karto in ay jiri karaan shakhsiyaad iyo machadyo ku shaqaysta waxa aan dibadaha idiin ku dirayna shaqo ama fursado waxbarasho dibadaha ah oo lacago badan si sharci daro ah uga uruursada dadka oo ay soo badanayaanna.
Total views : 7512579